Koob leh Qaab Gacmeed: Dakhli deggan oo lagu aqoonsado waqtigiisa | vfxAlert official blog
Koob leh qaab gacan qabasho: macaash ka qaadashada sii socoshada
Sidaas buugaag badan ayaa laga qoray oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la aqoonsado qaababka falanqaynta farsamo in talooyinka kala duwan ee bilowga ah waxay ka dhigi kartaa madaxaaga wareejin. Qaababka badan, "Koobka gacanta ku haya" ayaa ka muuqda - in kasta oo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ah aysan qabin booska hoggaamineed ee ganacsiga marka la eego inta jeer ee wax dhacaan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku kasbato dakhli xasilloon oo leh aqoonsi waqtigiisa ku habboon. Maqaalkan, waxaan ku falanqeyn doonnaa dhammaan sharciyada lagu aqoonsanayo laguna xaqiijinayo qaabka, waxaan ku siineynaa ganacsatada talobixin ku saabsan waqtiga ugu wanaagsan ee la furi karo oo la xiri karo xulashooyinka loona hubin karo heerka ugu hooseeya ee halista nidaamkooda ganacsi.
Si ka duwan qaababka falanqaynta laambadda caadiga ah ee caadiga ah, Koobka oo leh qaab gacan qabsi ah ayaa soo muuqday waqti aan sidaa usii fogeyn. Waxay markii ugu horreysay ka muuqatay William J. O'Neil, oo ah qoraa caan ah oo buugaag ah oo ku saabsan falanqaynta farsamada. Noocyada noocan oo kale ah ee calaamadaha ganacsiga ayaa laga helay hanti kala duwan oo muujisay sameynta qaabab ganacsi oo deggan. Aynu isla markiiba ogaanno mid ka mid ah astaamaha qaab-dhismeedkan - waqti dheeri ah. Badanaa waxaa suurtagal ah in lagu aqoonsado qaab ku saabsan isbeddel ku yimaadda muddo maalin ama toddobaad ah. Horumarinta iyo dijitaalka ganacsiga, ganacsatadu waxay bilaabeen inay ku ogaadaan xilliyada gaagaaban, tusaale ahaan, saacad kasta.
Helitaanka qaabka jaantuska?
Si loo tixgeliyo qaabka sida buuxda loo sameeyay, shuruudaha soo socda waa in la buuxiyo:
1. Jaantuska waa inuu si muuqata u muuqdaa kor u kac. Qaanuunka ayaa run u ah tirada caadiga ah - sidoo kale waxaa jira wax ka beddelid qaabeed, oo u baahan dhaqdhaqaaq xagga hoose ah.
2. "Jirka" laftiisu waa sixitaan ku saabsan isbeddelkii hore ee dhinaca bidix, oo ka riixaya taageerada maxalliga ah (hoose ee baaquli) iyo koritaanka xiga ee jihada hore ee qeybta midig. Qiyaasta ugu weyni waa in kala-baxu aanu ka badnaan 80% isbeddelkii hore oo dhan. Si kasta oo ay tahay waqtiga aan ka hadlayno, haddii hoos u dhacu ka bato tilmaamahan, waxay ka dhigan tahay inaysan ahayn dhicitaan muddo-gaaban ah oo ku lug leh, laakiin dib u noqoshada isbeddelka.
3. Qaybta saxda ah ee jaantuskan waxay noqon kartaa qaab qaab kale ah "calan". Kani waa marin yar oo flat flat ah oo loo jiheeyay jihada ka soo horjeedda kor u kaca. In Forex, sida suuqyada kale ee maaliyadeed, oo ay ku jiraan ganacsiga binary ee internetka, xilliyadaas oo kale, hagaajin kale oo maxalli ah ayaa badanaa dhacda. Xilliyadahan oo kale, jaantusku wuxuu marayaa marxalad kale oo yar oo koritaan ah, amarrada xaddidan ayaa loo xiray amarrada waaweyn ee ganacsatadaas kuwaas oo wali rajeynaya dib-u-noqosho.
4. Qoraagu wuxuu xusay muddo dheer oo ah sawir buuxa oo ku yaal jaantuska - markuu adeegsanayo jaantusyada halbeegga ah hal toddobaad; tani waxay qaadan kartaa ilaa 3 bilood. Waxa ugu muhiimsan uguna wargelinta badan waa aqoonsiga tusaalaha jaantuska. Waa in aan la iloobin in nidaamyada otomaatiga ah ay sidoo kale ogaan karaan isbeddello farsamo oo badan. Sidaa darteed, waa lagu doodi karaa in «Koobka gacanta lagu hayo» qaabka dib loogu ciyaari doono ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ikhtiyaari ah, taas oo keenaysa kororka tirada amarrada inta lagu gudajiro sii socoshada.
Arrin kale oo ay tahay in ay muddo dheer adkeynaysa shaxda, xoog dhaqaaqo ku xiga uu noqon doono.
5. Ugu dambeyntiina, waxaad dhihi kartaa qaabeynta ayaa dhacday kadib markii garaafku ka jabay khadadka sare ee qaabka kore ee 'Koobka' (fiiri sawirka hoose).
6. Qiyaasta suuqyada ee O'Neil waa inay u dhaqmaan sida soo socota:
hoos u dhac marka qaybta bidix u muuqato;
joog hooseyso markaad sawiraysid salka;
si tartiib tartiib ah ayey u kordhayaan markii isbeddelku isu beddelayo koritaan waxayna gaarayaan heerar sarreeya marka khadka ugu dambeeya ee qaabku jabo.
Aynu eegno tusaale qaab ah shaxda. Ogeysiis muhiim ah: markaad isticmaaleyso tilmaamayaal dheeri ah, waa inaysan jirin shuruudo looga baahan yahay beddelka isbeddellada muddada-dheer iyo muddada-dheer, laakiin aaladaha farsamada iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa tan u arki kara si dhakhso leh oo ku saabsan sixitaanka muddada-gaaban iyo dib-u-celinta.
Goorma ayaa la furayaa ganacsi?
Si aad si buuxda u hirgeliso sameynta «Koobka», ganacsade waa inuu u dhaqmaa sida soo socota - fur ikhtiyaar xilligan oo uu jabayo khadka sare ee dhinaca midig. Istaraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh ayaa ah in la galo oo keliya marka qiimaha uu ka gudbo salka qaybta sare ee qaabka. Waqtiga uu dhacayo waxaa lagu xisaabiyaa xadka hoose ee calanka, ama heerka iska caabintiisa haddii laga furo xadka guud (khadka buluuga ah ee ballaaran ee sawirka).
Ha iloobin in qaabka dhammaan heerarka qaabeynta ay tahay inuu lahaado xaqiijinta xogta mugga ganacsiga (xitaa xogta sax). Waxaa jira sharaxaad macquul ah oo ku saabsan sharcigan: amarrada badan ayaa la furaa inta lagu jiro horumarinta xaaladda suuqa, waxay sii xoogeysanayaan aaminsanaantooda habka gadaal ee isbeddelka.
Sida qaabka aasaasiga ah, Koob gadaal loo rogay (gadaal) oo leh gacan qabasho ayaa muujinaya dib-u-dhac maxalli ah, kaas oo muddo-dheer ku eg u eg sixitaanka kale ee isbeddelka adduunka. Aynu eegno jaantus la mid ah calaamadaha ganacsiga Binomo:
Waxaan ku shaqeyneynaa qaab isku mid ah, laakiin xeerar ka soo horjeeda. Ugu yar ee ugu dhow ee qiimaha, ka dib taas oo ay jiri karto dib-u-celin ama sixitaan, waxay ka timid qiimaha hadda ka jira masaafada "jirka". Haddii ay jiraan calaamado loogu talagalay xulashada CALL, ku xisaabi dhinaca midig ee kore. Jaantusku wuxuu muujinayaa tusaale ka mid ah ganacsiga binary-ka ee internetka ee qaab dhammaystiran oo sax ah. Iyo xitaa wax yar oo ka badan marka loo eego "classics".
Dheeraad ah oo ay weheliso isbeddellada, waxaad arki kartaa "Koob kale oo leh gacan" oo aan si dhammaystiran loo samayn, ka dib taas oo sicir-bararku sii socday. Tani mar kale waxay xaqiijineysaa sharciga in badanaa ay jiraan qaabab shumacyo aan caadi ahayn oo ku yaal jaantuska, ganacsaduhu waa inuu awood u leeyahay inuu la shaqeeyo haddii kale dhibcaha gelitaanka wanaagsan waa la tabayaa!
Had iyo jeer xusuusnow in qaababka qallooca ee hoos u dhaca ay u baahan doonaan falanqeyn taxaddar badan leh. Sida tirakoobyadu muujinayaan dhammaan hantida maaliyadeed (lacagaha, saamiyada, mustaqbalka), hoos u dhaca qiimaha ayaa ka dhakhso badan muddo ka yar koritaanka. Dib-u-noqosho ayaa ku dhici karta marxaladda qaabeynta qaab-dhismeedka ama isla marka ay dhammaato. Had iyo jeer ka raadi xaqiijin dheeri ah tilmaamayaasha farsamada iyo calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah. Ganacsatada xirfadleyda ahi waxay ganacsi ka furan karaan qaab "aan dhammaystirnayn" haddii ay xaqiijin leeyihiin, halka kuwa bilowga ahi ay sugayaan dhammaan shuruudaha in la buuxiyo!
Let`s koob. "Koobka gacanta lagu hayo" waa fursad fiican oo looga faa'iideysan karo hal ama dhowr ikhtiyaar sidii hore ee wax u socdaan. Waxay u oggolaaneysaa ganacsatada maalinlaha ah inay qorsheeyaan ganacsigooda hadda ku saleysan isbeddellada suuqa ee muddada dhexe iyo muddada fog. Sidoo kale waa mid ka mid ah xulashooyinka lagu kalsoonaan karo ee lagu galo suuqa waqtiyada waaweyn marka ay jiraan calaamadaha ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo gaagaaban.
Istaraatijiyadaha loogu talagalay inay dhacaan toddobaad ama ka badan waxay awoodi doonaan inay la kulmaan dhammaan faa'iidooyinka aqoonsiga iyo adeegsiga qaabkan wax ku oolka ah oo ah qaab faa iidooyin waaweyn ah, iyadoo la siinayo inay si habboon u horumareen oo qayb ka ah istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah loo dhan yahay. Haddii aad si cad u raacdo dhammaan sharciyada, macaashka kama mid noqon doono soo socda.